ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: February 2009
မျက်ကပ်မှန်နဲ.ကိုကိုကြောင် Cat given contact lenses
Cat given contact lenses
အသက် ၁၅ နှစ်ရှိကြောင်ကြီးတစ်ကောင်သည်ဆေးပညာသမိုင်းတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မျက်
သောမျက်စေ.ရောဂါတစ်မျိူးခံစားနေခဲ.ရရှာသည်ဟု sky news သတင်းဌာနကဖော်ပြထားသည်။
ကြောင်ကြီး Ernest ၁၃ နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ရာ Wright ကျွန်း Godshill RSPCA စခန်းမှဝန်ထမ်း
တွေကပိတ်နေတယ်လေ... အခုတော.ပွင်.သွားပါပြီ ” လို.၄င်းဌာနခွဲအုပ်ချူပ်ရေးမှူး Les Burrows
” ကျွန်တော်တို.က ကြောင်ကြီး Ernest ကိုခွေးလေးတွေသစ်ရောက်တိုင်းခေါ်လာပြီးဒီကြောင်ကို
” အခုတော.မျက်စေ.မြင်လာပြီဆိုတော.သူခွေးတွေကိုကြောက်ရွံ.စိုးထိတ်လာပါတယ် ” လို.အဆို
ကြောင်ကြီး Ernest ကတော.အဆိုပါဌာနအဆောက်အဦမှာပဲဆက်ပြီးနေဦးမှာပါတဲ.... ဘာဖြစ်လို.
အင်း ... သူလည်းဇင်ဇင်ဇော်မြင်.လို.ကာလာလေးနဲ.မျက်ကပ်မှန်တပ်ထားလေသလားပဲ....
A 15-year-old cat's eyesight has been restored by contact lenses in what's believed to beamedical first.
Ernest the cat was suffering from entropion, which meant his lids turned inwards and scratched his eyeball, reports Sky News.
Vets suggested the innovative solution because the cat was too old to riskageneral anaesthetic.
Staff at the Godshill RSPCA on the Isle of Wight - Ernest's home of 13 years - said they had never heard ofacat wearing contact lenses before.
"He's much more comfortable. Previously his eyes were shut, now they are open," branch administrator Les Burrows said.
"We always used Ernest to test new dogs brought into us to see if they were scared of cats because he was never fazed.
"He is much more wary of the dogs now because he can actually see them."
Ernest will continue to live at the RSPCA because he isapermanent and popular fixture on the reception desk, he added. The lenses will be removed and cleaned by staff every three weeks.
Posted by peter kyaw | at 12:16 PM |0comments
Labels: news : Sky News
<font size="2" color="#000000" face="Verdana"><A href="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/click/zone?zid=22&amp;pid=0&amp;lookup=true&amp;position=1" target="_top"> <IMG src="http://gulfnews.advertserve.com/servlet/view/banner/image/zone?zid=22&amp;pid=0&amp;position=1" height="250" width="250" hspace="0" vspace="0" border="0" alt="Click Here!"> </A> </font>
Posted by peter kyaw | at 12:49 PM | 12 comments
ထိုင်းနိုင်ငံမှကျားကျောင်း ၊Tigers at Thai Temple Drugged Up or Loved Up ?
ဘ၀ါ ဘ၀ ကဆွေမျိူးတွေလေ ....
၀ယ်တည်ရှိသည်.Wat Pa Luang Ta Bua ကျောင်းတော်မှဘုန်းတော်ကြီးများ၏တစ်နေ.တာလုပ်ငန်းများ
ရာတော်ကြီး Pra-Acharn Phusit ကအမိန်.ရှိပါသည်။
တဲ.နောက်အခုအချိန်မှာတော.ကျားအကောင်ရေပေါင်း ၃၄ ကောင်အထိဒီကျောင်းမှာရှိနေပါပြီ။
ဆရာတော်ကြီးက ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားရာမှာ " သူတို.တစ်တွေ ( ကျားတွေ ) ဟာအရင်
ဘ၀ကငါ.ရဲ.မိဘ၊ဆွေမျိူး၊သား၊သမီးတွေဖြစ်ခဲ.ကြတယ် " လို.မိန်.ကြားခဲ.ပါသည်။
ချစ်စရာကြီးနော် ( ကျားကိုပြောတောနော် )
နေ.စဉ်နေ.တိုင်းကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကဧည်.သည် ၁၀၀၀ လောက်အထိ ဟာသူတို.ကိုယ်တိုင်ကျားတွေ
Georgina Stanley က ABC သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ.ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကလည်း walkie talkie နဲ.ဗျ၊ အချဉ်တော.မဟုတ်ပေဘူး။
ပြီတဲ.ကျားပြပွဲအလုပ်အတွက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို.၀န်ထမ်းပေါင်း ၅၀ ကိုခေါ်ယူခန်.ထားနေရပါပြီ။
အဲဒီအထဲမှာလွန်ခဲ.တဲ. ၇ နှစ်လောက်ကဒီကျောင်းကိုပထမဦးဆုံးရောက်ခဲ.တဲ. ရုရှားက Margarita
ကြီးကိုနေခွင်.တောင်းတော.ဆရာတော်ကြီးကခွင်.ပြုတာနဲ.နေဖြစ်သွားတာလေ လို. Margarita
၀င်ကြေးသက်သက်က ၁၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးကျားတွေကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်သိပ်ပြီးဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို
ယင်တော.နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၅၀ ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်။(ကျားတစ်ကောင်ကိုတစ်နေ.အသား ၁၃ ပေါင် ကျွေးရပါတယ်တဲ.။)
ဒီလိုမျိူးဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ယင်ဒေါ်လာ ၅၀ ၊ တန်တယ်နော်
သြစတြေးလျကပဲလာတဲ. Pete က အဲဒီကျားတွေကိုသူတို.ဘာဆေးတွေတိုက်ထားသလဲတော.
" ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကတိရိစ္ဆာန်တွေကိုမူးယစ်ဆေးတိုက်ကျွေးတယ် ? အဲဒါဟာ
အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ.အလုပ်ပါ။တိရိစ္ဆာန်တွေမူးယစ်မေ.မြောနေရာကနေပြန်သတိရလာ
ယင်အသိကင်းလွတ်ပြီးမြင်မြင်သမျှကိုလိုက်အန္တရယ်ပြုတတ်ပါတယ်။ ” လို.Steinhardt က
ခ ( Care for the Wild (CWI) ရဲ.အစီရင်ခံစာမှာတော.ကျားကျောင်းကိုတိရိစ္ဆာန်များတရား
ကျားကျောင်းမှာ ၇ လတာအခမဲ.ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်အားပေးနေတဲ.အမေရိကန်နိုင်ငံကာလီဖိုးနီး
ယားပြည်နယ်ကဥပဒေကျောင်းသား Robyn Shelby ကတော. ” ကျွန်တော်ကတော.ဒီမှာသ
နေတာပါ။လူတွေကြားမှာသွားလာနေတာမြင်တွေနေနိုင်တာပဲ ” လို.ဆိုလိုက်ပါတယ်။
တဲ.နေရာကိုသွားပြီးကြိုက်တာကြည်.နိုင်ပါတယ် ” လို.သူမကဆက်ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံမျိူးကနေလာရတဲ.ဧည်.သည်တွေကိုဘုန်းကြီးရဲ.ကျားကိုက်လိုက်တာမျိူးမလိုလားပါဘူး ” လို.
Tim Pollard ကတော.နောက်ဆုံးပေါက်တဲ.ကျားပေါက်လေးတွေကိုလေ.ကျင်.ပေးရတဲ.ဖိုးကံ
လို. Pollard ကရှင်းပြပါတယ်။
စ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးအစားတိရိစ္ဆာန်တွေကိုအမြတ်ထုတ်နေတယ်လို.ယုံနေကြပါတယ်။
Wildlife Friends of Thailand အဖွဲ.ရဲ.တည်ထောင်သူ Edwin Wiek ကတော.ကျားကျောင်းရဲ.
သူက ABC သတင်းဌာနကိုပြောခဲ.ရာမှာ ဒါမျိူးဘယ်တုံးကမှမလုပ်နိုင်ခဲ.ဘူး၊လုပ်လဲလုပ်လို.ရမှာ
အမဲလိုက်မှုတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ၅၀၀၀ ကနေ ၆၀၀၀ မျှသာရှိတော.တဲ.ကျားများရဲ.ကောင်
ရေ ၂၀၀ ခန်.သာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတော.ပြီးကျားများဟာမျိူးတုံးတော.မယ်.အန္တရာယ်နဲ.ရင်
ကျောင်းရဲ.၀န်ထမ်းအဖွဲ.က ABC သတင်းကိုပန်ကြားရာမှာသူတို.ကျောင်းအကြောင်းကိုနိုင်ငံ
ဓါတ်ပုံများမေးလ်ဖြင်. forward ပို.ပေးသောညီမ မခိုင် အားကျေးဇူးတင်လျက် ...
They call it the Tiger Temple, and its story is the stuff of fairy tales. According to Abbotatiger cub orphaned by poachers was brought to the temple years ago.
Hopefully, people get to love them by seeing them so close and then they go bak and if they come across any tiger conservation activity, they'll support them in the future," she said.
Posted by peter kyaw | at 12:57 PM |0comments
Labels: news : ABC News
World's Wierdest Cures ထူးခြားထွေပြားကုထုံးများ
WE reckon this strange snap is ribbit-ing.
အသက်၆၆နှစ်ရှိ Jiang Musheng ဟာခဏခဏဗိုက်အောင်.ပြီးချောင်းဆိုးနေတာနှစ်ပေါင်း၂၀ ရှိပါ
The Chinese man pictured is eatingalive frog ... to cure his stomach ache!
Jiang Musheng, 66, suffered frequent abdominal pains and coughing 20 years ago, until an old man suggested tree frogs asaremedy.
Toad-ay, Jiang isanew man - regularly glugging down the slimy creatures to keep him in rude health.
And he's not the only one resorting to weird and wonderful ruses to get well.
Burns unit ... world's weirest cures
This Chinese remedy is nuts! A woman receives traditional treatment in Shandong province, withawalnut on her eye and ignited dry moxa leaves in her ear.
Buzz off, mate ... world's weirdest cures
A Chinese man receives treatment with bee venom for rhinitis, an inflammation of the nasal membranes.
This clinic uses venom released into the patient's body when the bee stings to cure rheumatism and arthritis too.
Un-bee-lievable ... world's weirdest cures
Haj Mohamed el-Minyawi allows one of his bees to stingapatient suffering from ear problems in Cairo July 14, 2007. Minyawi believes that the bee stings have special properties, that when used on different parts of the body can cure ailments like kidney problems, appendicitis and even cancer. Minyami has opened his home to public and treats people from all over Cairo
Turtle-y ridiculous ... world's weirdest cures
(ဂေါက်ရောဂါပေါ.ဗျာ)လိပ်ပုတစ်မျိူးနဲ.ကိုပေးနေပါတယ်တဲ. .. ပုံမှာမြင်ရတာကတော.အမျိူးသမီး
လူအများကယုံကြည်နေကြပါတယ်တဲ.ခင်ဗျာ...လူမစွမ်းနတ် မ တာမဟုတ်ပဲတိရိစ္ဆာန်မတာပေါ.နော်..
A man holdsaterrapin, whose touch is believed to cure rheumatism and other bodily ailments, as he prepares to treat the face ofavillager near Phnom Penh.
Belief in the supernatural healing powers of animals such as turtles, cows and snakes is relatively common in Cambodia.
Child's play? ... world's weirdest cures
ပေါ်ကကျလာတဲ.ကျောက်တုံးကိုရပြီးကတည်းကသူနာမည်ကြီးလာတာပါပဲ။ ( မိုးကြိုးသွားကိုမြန်မာ
Nine-year-old Muhammad Ponari,aboy whom locals believe possess healing powers, dips his "magic stone" intoabottle of water duringamass healing event in East Java.
About two months ago, Ponari caughtastone which fell from the sky, shortly after lightning struck the area he was playing in.
Believing that this stone contained magical healing powers, thousands have sought Ponari's help by drinking the water he dips his stone in.
The cheek of it ... world's weirdest cures
A woman receives traditional medical treatment with dead scorpions on her face atahospital in China's Shandong province.
Something fishy going on ... world's weirdest cures
An asthma patient swallowsalive fish as part of his treatment in Bombay.
Every year in June, the Bathini Goud brothers from Hyderabad draw thousands to their camp to take part in the administering of the fish medicine, which they believe cures them of asthma and respiratory problems.
The tiny river fish's mouth is stuffed with herbal medicine before it is forced live down the throat of asthmatics.
The combination of herbs used in the procedure isasecret that is tightly guarded by the Bathini Goud family which claims to have known it for 150 years.
Holy moly ... world's weirdest cures
Parapsychologist Fernando Nogueira communicates with spirits with one of his patients in Fafe, northern Portugal.
Surrounded by clean hospital beds in his new Occult Sciences Centre in northern Portugal, Nogueira makes exorcism sound almost mundane.
Mohmmed Emad, 41, lies buried neck-deep in the sand in the El Dakrror mountain area near Cairo.
အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို.အနီး El Dakrror တောင်အနီးနားမှာတော.မိုဟာမက်အီမက်ဆိုတဲ.အသက်၄၁နှစ်
The local people believe that being buried in the sand during the hottest time of the day isatherapeutic treatment which can cure rheumatism, joint pain and sexual impotency.
On porpoise ... world's weirdest cures
Peruvian Ety Napadenschi is touched byadolphin named Wayra duringatherapy session for pregnant women atahotel in Lima.
The dolphin's high-frequency sounds are said to stimulate the unborn baby's brain to develop their neuron abilities.
Water way to cure acne ... world's weirdest cures
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိူမြို.မှာကျင်းပတဲ.အလှကမ္ဘာကုန်စည်ပြပွဲမှာဂျပန်အမျိူးသား (ဖိုးလှချင်) တစ်
ယုံကြည်ကြတဲ Garra rufa ငါးတစ်ကောင်နဲ.ကုသမှုကိုခံယူနေတာပါတဲ.ခင်ဗျာ..
Kazuhiro Aoki puts his face in an aquarium as Garra rufa - fish said to help with skin conditions - nibble his skin at the Beautyworld Japan trade fair in Tokyo.
Posted by peter kyaw | at 12:33 PM | 1 comments
Parents ... Alfie and Chantelle with Maisie
လက်ရှိအသက်၁၃ နှစ်နဲ.မလိုက်အောင်ပဲသူ.မျက်နှာလေးက ၈နှစ်သားလေးလိုပဲနုနယ်သေးပေမယ်.
သူ.ရီးစားချန်တဲလ်တစ်ယောက်လွန်ခဲ.တဲ. ၄ ရက်က ၇ ပေါင်နဲ.သုံးအောင်စရှိတဲ.သမီးလေးမေစီကို
အသက်၁၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ.သူ.ရဲ.ရည်းစားနဲ.Play Station ကစားနေတဲ.ကောင်လေးက”ကျွန်တော်တို.
ဆိုပါတယ်။ ( အခုတော.ဗီဒီယိုဂိမ်းဆော.လိုက်ဦးမယ်ပေါ.... )
ကရှက်စနိုးနဲ.ဆိုပါတယ်။ ( ခိုးစားတာအထုပ်နဲ.အထည်နဲ.လူမိသွားတာကိုး...)
ဘူး။ကျွန်တော်.အဖေကတော.တစ်ခါတစ်လေ ပေါင် တစ်ဆယ်လောက်တော.ပေးပါတယ်”လို.သူက
သူ.ရဲ.ဇတ်လမ်းကို The Sun သတင်းစာကြီးကဖော်ပြလိုက်တဲ.အခါတစ်နိုင်ငံလုံးအထိတ်တလန်.ဖြစ်
အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ.အယ်ဖီ.အဖေဒင်နစ်ကသူ.သားဟာအိမ်မှာဂိမ်းကစားနေရမယ်အရွယ်ပါ။ဒါ
အယ်ဖီနဲ.သူ.ရည်းစားတို.ဟာလွန်ခဲ.တဲ.ကိုးလကျော်အယ်ဖီ.အသက် ၁၂ နှစ်ပဲရှိနေသေးတုံးပဲတစ်ကြီမ်
အယ်ဖီကတော.အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ.သူ.အမေနီကိုလာနဲ.အတူနေပါတယ်။ဒါပေမယ်.လည်းအချိန်
သူ.သားဟာတကယ် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပါပဲလို.ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ.တဲ.ညပိုင်းကတော.ပဋိသန္ဓေဖျက်ချရေးကိုဆန်.ကျင်တဲ.ခရစ်ယာန်ကူညီရေးအဖွဲ. က မီကယ်လာ
ရောက်ဘူး၊အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြသနေတာပါပဲ ” လို.သူကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ.အသက်အငယ်ဆုံးကလေးအဖေစံချိန်တင်ထားသူကတော. အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်
ရှန်စတီးဝါ.ဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တုံးကသူဟာအသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိသူ.ရည်းစားအန်မာဝက်ဘ်
ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြဖို. DNA ဆေးစစ်ဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီတဲ....
The Sun လို.နာမည်ကြီးသတင်းစာတွင်အထူးဆောင်းပါးဖြင်.သတင်းပါလာပြီးတစ်နိုင်ငံလုံး
The baby father ... Alfie Patten with little Maisie
Today Sussex Police and the local council's children services said they have investigated the case and
Posted by peter kyaw | at 9:23 AM |0comments
Wanna have like her perfect bum!!
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိအန်ဒရီယာလီ မှာသူမကိုထိုးပေးခဲ.သောဆီလီကွန်နှင်.ဓါတ်မတည်.ပဲအဆိပ်
သင်.ကာကျောက်ကပ်လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ.ပြီးသူမ၏သူငယ်ချင်း ၃၃ နှစ်ရှိဇာကီယာတီးဂဲလ်ကတော.
တရားခံမှာအသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ရှာဟွန်ဒါလင်းဆေး အမည်ရှိအမျိူးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူမထိုးပေး
ထိုးပေးရန်အတွက်ပေါင်စတာလင် ၃၀၀ ကျော် ( ဒေါ်လာ ၆၀၀ ) ခန်.ပေးခဲ.ရသည်။
Posted by peter kyaw | at 7:32 AM | 1 comments
ကုန်လို.ဘွားဘွားLee Redmond ဟာတော်တော်ပဲစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲခဲ.ရပါသည်။
သူမစီးလာတဲ. SUV ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အသက်ကယ်ထိုင်ခုန်နှင်.အပြင်ကိုလွင်.ကျခဲ.တဲ.
Utah ပြည်နယ် Salt Lake မြို.မှာနေတဲ.ဘွားဘွားLee ဟာသူမရဲ.လက်သည်းအားလုံးစုစုပေါင်း
အရှည် ၂၈ ပေရှိတာမို.ကမ္ဘာ.Guiness မှတ်တမ်းဝင်အဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ခံခဲ.ရပါတယ်။
လက်သည်းအားလုံးထဲမှာသူမရဲ.ညာဖက်လက်မရဲ.လက်သည်းဟာ ၂ ပေ နဲ. ၁၁ လက်မအထိအံ.
တစ်ချိန်တုံးကရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပေါင် ၆၀၀၀၀ ပေးပြီးသူမရဲ.လက်သည်းတွေညှပ်
သူမဟာ Guiness Book of World Record နဲ. ရစ်ပလေရဲ.ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ တီဗီအစီအစဉ်
Posted by peter kyaw | at 12:27 PM |0comments
ထိုင်းနိုင်ငံမှကျားကျောင်း ၊Tigers at Thai Temple...
Two women suffer organ failure after cosmetic bott...
သေမင်းကိုပျက်ရယ်ပြုသူ၊Lightning strike dad survives
ကိုးလလောက်တော.စောင်.ကြည်.ရမယ် ၊The9- Month Wait
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု ခြေရာခံစနစ် Google Latitude
The minister who postedanaked picture of herself...